ရုရှားထုံးတမ်းစဉ်လာများ - Baba Yaga | Absolut ခရီးသွား
maruuzen | | ရုရှားနိုင်ငံ
သြဂုတ်လ ၂၂ ရက်သည်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာရိုးရာနေ့ဖြစ်ပြီးလူတို့အားစည်းလုံးစေသည့်ပြက်လုံးများ၊ သုတ္တံ့များ၊ ကခုန်မှုများ၊ ပုံပြင်များ၊ ဒဏ္,ာရီများ၊ ဂီတများဖြစ်သည်။ ရိုးရာဇာတ်ကောင်လူကြိုက်အများဆုံး s ၏ baba Yaga.
၎င်းသည်ဆလာဗစ်ယဉ်ကျေးမှုနှင့်သက်ဆိုင်သဖြင့်နယ်နိမိတ်ချင်းထိစပ်နေသော်လည်းရုပ်ပြကမ္ဘာ၊ ဖက်ရှင်မဂ္ဂဇင်းများနှင့်ရုပ်ရှင်ရုံများအထိဆလာဗစ်မဟုတ်သောပုံပြင်များသို့ပင်ကူးစက်ခဲ့သည်။ ဒီနေ့ Absolut Viajes တွင် Baba Yaga ၏လက်မှရုရှားရိုးရာပုံပြင်တစ်ပုဒ်ရှိသည်။
1 Yaga berry သီး
2 Baba Yaga ၏ပုံပြင်များ
3 လူကြိုက်များသောယဉ်ကျေးမှု၌ Baba Yaga
Yaga berry သီး
ငါတို့အရင်ပြောခဲ့သလိုပဲ Slavic ရိုးရာကနေဇာတ်ကောင်ဖြစ်ပါတယ် ထိုအရာသည်အလွန်ဟောင်းနွမ်းလှ၏။ အကြောင်းပါ သဘာဝလွန်ဖြစ်လျက်ရှိ အရာတစ် ဦး ၏ပုံစံပေါ်လာသည် အဟောင်းမိန်းမသို့မဟုတ်ညီအစ်မသုံး သူတို့အတူတူအမည်အတူတူမျှဝေပါ။ သူသည်များသောအားဖြင့်တဲသို့မဟုတ်တဲတွင်နေထိုင်သည်။
ဒါဟာဖြစ်ပါသည် စိတ်မကောင်းစရာဝေဝါးဖြစ်ရလိမ့်မည်။ အဖြစ်ပုံပေါ်သည့်အတွက်ပုံပြင်များရှိပါတယ်သကဲ့သို့ ကလေးစားချင်သောသူ, ကဖြစ်သည့်အတွက်အခြားသူများလည်းရှိပါတယ် မိခင်အဟောင်းမိန်းမ အဲဒါကိုဖြတ်ပြီးလာတဲ့လူတွေကိုကူညီပေးတယ်။ ထို့အပြင်သူသည်တောရိုင်းဘ ၀ နှင့်အရှေ့ဥရောပ၏ရိုးရာအစဉ်အလာအရှိဆုံးမမေ့နိုင်သောပုံများအနက်မှ Baya Yaga အားလုံးနှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသည်။
ဆလဗ်ကမ္ဘာအတွင်းရှိနယ်နိမိတ်များကိုကျော်ဖြတ်နိုင်သည့်ဇာတ်ကောင်တစ် ဦး ဖြစ်သောကြောင့်သူ၏အမည်မှာမူကွဲများရှိသည်။ စကားလုံး baba အဟောင်းရုရှားနှင့်နည်းလမ်းများကိုရည်ညွှန်းသည် သားဖွားဆရာမ၊။ ယနေ့ခေတ်သစ်ရုရှား၌ထိုစကားလုံး babushka, အဖွား, ဥပမာ, ဒါမှမဟုတ်အရောင်သူမ၏ထံမှဆင်းသက်လာ အဖွားလည်း။ ဆိုလိုသည်မှာတစ်ဖက်တွင်မူ၊ အခြားတစ်ဖက်တွင်စကားလုံး၏အသုံးမ ၀ င်သောအဓိပ္ပါယ်များသို့မဟုတ်အသုံးပြုမှုအချို့လည်းရှိသည်။
ထို့ကြောင့် baba ဟူသောစကားလုံး၏ဤမရေရာမှုများမှတစ်နည်းနည်းဖြင့် folkloric ဇာတ်ကောင်နှင့် ပတ်သက်၍ ကွဲပြားခြားနားသောပုံပြင်များပေါ်ထွက်လာသည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာမိခင်အဟောင်းမိန်းမနှင့်မကောင်းသောနိုင်စွမ်းဖြစ်ခြင်း၏။
ပြီးတော့ဘာကိုဆိုလိုတာလဲ ရေတံခွန်, နာမတျော၏ဒုတိယဒြပ်စင်? သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အရပြောရလျှင်၎င်းသည်ဇာစ်မြစ်ကိုရှာဖွေရန်အလွန်ခက်ခဲသည်၊ သို့သော်ဆလာဗစ်ဘာသာစကားများစွာတွင်၎င်း၏အမြစ်သည်တူသောအရာများကဲ့သို့ထင်ရပုံရသည် ဒေါသ၊ ကြောက်ရွံ့မှု၊ ထိတ်လန့်မှု၊ ဒေါသ၊ နာမကျန်းမှု၊...
Baba Yaga ၏ပုံပြင်များ
နာမည်နှင့်စရိုက်လက္ခဏာမရေရာမှုများနှင့် ပတ်သက်၍ ဤရှင်းပြချက်ဖြင့် Baba Yaga နှင့် ပတ်သက်၍ ပုံပြင်များမှာအဘယ်နည်း။ ကောင်းပြီ, ဒီကျော်ကြားစုန်းနှင့်ပတ်သက်။ ပုံပြင်များအများကြီးရှိပါတယ်ကျနော်တို့ကသူတို့ကိုနေရာတိုင်းကျော်ရှာပါ။ ယူကရိန်း၊ ရုရှားနှင့်ဘီလာရုစ် အဓိကအားဖြင့်။
ဒါဟာဖြစ်ပါသည် ကြက်သားအရိုးများဖြင့်ပြုလုပ်ထားသော ဦး ထုပ်ဖြင့်အမျိုးသမီးအဟောင်းတစ်ဦးနှင့်အတူ တံမြက်စည်းအမြဲတမ်းမော်တာနားမှာရှိတယ်။ သူ၏တဲသည်အရိုးများနှင့်လုပ်ပြီးလေနှင့်လှည့်နိုင်သည့်နေရာတိုင်းတွင်သူသွားသည်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့သူက ဦး ခေါင်းခွံများဖြင့်အလှဆင်ထားသောကြောင့်အတွင်းနှင့်အလင်းနှင့်မတူသောအရွယ်အစားအမျိုးမျိုးရှိသောဖယောင်းတိုင်များစွာရှိသည်။ အတွင်းပိုင်းတွင်ဝိုင်နှင့်အသားများလည်းရှိသည် ရောင်စဉ်တန်းအစေခံကျွန် ဘယ်သူကအဲဒါကိုအစေခံ?
အတော်များများကပုံပြင်များတစ် ဦး အဖြစ်သူမ၏ဖော်ပြရန် ချွန်ထက်သောသွားနှင့်စိုပြေသော၊။ အဓိကအားဖြင့်၎င်းင်း၏သားကောင်များကိုမျိုသိပ်စေသည့်ဇာတ်လမ်းများဖြစ်သည်။ သို့သော်အခြားပုံပြင်များတွင်သူမကောင်းသောနေရာ၌ဖော်ပြချက်သည်သာမန်အမျိုးသမီးတစ် ဦး ၏ဖော်ပြချက်ဖြစ်သည်။
သငျသညျပုံပြင်များအမျိုးမျိုးကိုဖတ်ပါလိမ့်မယ်: သော ကလေးများကိုစားသည်၊ စိတ်ဝိညာဉ်များကိုစားသုံးသည်။ သေသည့်နေ့ကိုဆုံးဖြတ်သည် လူများ၏, ကဘာလဲ ကလေးယဇ်ပူဇော်ခြင်းကိုတောင်းသောသူသည် capricious စည်းစိမ်ဥစ္စာအတွက်လဲလှယ်လျှင်သူ၏အိမ်သည်အသက်ရှင်သောကမ္ဘာနှင့်လူသေတို့၏ကမ္ဘာအကြားတံတားဖြစ်သည်။
ဒါကြောင့်ခင်ဗျားဖတ်ခဲ့တဲ့ဇာတ်လမ်းပေါ်မူတည်ပြီး Baba Yaga ရဲ့ပုံစံတစ်မျိုးဒါမှမဟုတ်အခြားဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်ကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်၊ အဲဒါကမိန်းမအိုကြီးမဟုတ်ပေမယ့်အစ်မသုံးယောက်လည်းပါလိမ့်မယ်။ ရှိပါတယ် နှစ်ခုထက်ပိုသောလူကြိုက်များပုံပြင်များကြွင်းသောအရာတို့ကိုငါသိ၏။
ဒီသဘောအရညီမသုံးယောက်ဟာဇာတ်လမ်းပါ Lady Tsar, Alexander မှ Afanasyev အားဖြင့် XNUMX ရာစု၌စုဆောင်း။ ဇာတ်ကောင်ဇာတ်ကောင်မှာ Baba Yagas သုံး ဦး နှင့်တွေ့ဆုံသည့်ကုန်သည်၏လှပသောအိုင်ဗင်ဖြစ်သည်။
ပထမ ဦး ဆုံးသူသည်အခန်းထဲသို့ပြေး ဝင်၍ ပထမအစ်မနှင့်အတူသူတို့စကားပြောကြသည်။ သူသည်အခြားညီမနှင့်စကားပြောရန်သူ့ကိုပထမနှင့်တူညီသည့်အခန်းသို့ပို့သည်။ သူသည်ယခင်စကားလုံးများကိုထပ်ခါတလဲလဲပြန်ပြောသည်၊ ထပ်တူမေးခွန်းများကိုလည်းဖြေကြားနိုင်သည်၊ သို့သော်သူသည်ဒေါသထွက်လျှင်သူ့ကိုစားလိမ့်မည်ဟုပြောသောကြောင့်တတိယနှင့်နောက်ဆုံးအစ်မကိုကြည့်ရှုရန်မစေလွှတ်ပါ။
ဒါပေမယ့်သူကသတိပေးဖို့၊ ဂရုစိုက်ဖို့၊ သူမရဲ့ ဦး ချိုကိုယူပြီးသူတို့ကိုထိုးနှက်ဖို့ခွင့်ပြုချက်တောင်းဖို့ကံမကောင်းရင်၊ ကောင်းပြီ၊ နောက်ဆုံးသူအဲဒီလိုဖြစ်သွားတယ်။ ချိုတွေမှုတ်လိုက်တဲ့အခါဒါဇင်နဲ့ချီတဲ့ငှက်တွေပေါ်လာပြီးတစ်ယောက်ကသူ့ကိုဆွဲထုတ်လိုက်တယ်။
အခြားလူကြိုက်များတဲ့ပုံပြင်ကတော့ လှပသော Vasilisa။ ဒီမိန်းကလေးဟာသူ့မိထွေးဆိုးနဲ့အစ်မနှစ်ယောက်နဲ့အတူနေတယ်။ အမှန်တရားကတော့သူမကိုသတ်ချင်ပြီးသတ်ပစ်ချင်တာပါ။ သူတို့သည်အကြိမ်များစွာကြိုးစားပြီးနောက်ဆုံးတွင်သူမသည်သူမအားစားသောက်တော့မည်ကိုသိသောကြောင့်သူ့ကို Baba Yaga တဲသို့ပို့လိုက်သည်။
သို့သော်၎င်းသည်မဖြစ်နိုင်ပါ၊ သူမအားအိမ်မှုထိန်းသိမ်းသူအဖြစ်ယူမှတ်သည်။ သူမသည်ခက်ခဲသောအရာများကိုပြုလုပ်ရန်ကြိုးစားသည်၊ သို့သော်မိန်းကလေးကအရာရာတိုင်းကိုကောင်းမွန်စွာလုပ်ပြီးအိမ်သို့ပြန်လာခွင့်ရှိသည်။ သူဟာအသက်ကြီးတဲ့အမျိုးသမီးမီးအိမ်နဲ့အတူပြန်လာပြီးမှော်မီးအိမ်တစ်လုံးကိုမီးထွန်းလိုက်ပြီးသူမရဲ့မိသားစုဆိုးထဲကို ၀ င်သွားပြီးသူမကိုရှင်သန်စေခဲ့ပါတယ်။ ပျော်ရွှင်ဖွယ်ကောင်းသောမိသားစုနှင့်ပျော်ရွှင်ဖွယ်ကောင်းသောကမ္ဘာကိုကြိုဆိုပါ၏။ အဆုံးတွင်လှပသောဗာစီလီဇာသည်မင်းနှင့်လက်ထပ်ခဲ့သည်။
ဒီအကောင့်နှစ်ခုဟာဥပမာတွေဖြစ်တယ် Baba Yaga ၏ folkloric character ၏မရေရာဒွိဟ - သူမကကောင်းသည်၊ သူမကဆိုးသည်၊ သူမအာဏာရှင်ဖြစ်ပြီးနူးညံ့သိမ်မွေ့တယ်၊။ ဤမရေရာဒွိဟသည်ရိုးရာအရအထူးကုများအတွက်သဘာဝနှင့်femတ္ထိစပ်မှုနှင့်ဆက်စပ်နေပြီး၎င်းကိုရိုးရာအစဉ်အလာအရထူးခြားစေသည်။
အဘယ်ကြောင့်? ကောင်းပြီ၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဥရောပရိုးရာပုံပြင်အများစုမှာဇာတ်ကောင်တွေဟာအရမ်းတည်ငြိမ်ပြီးသူတို့ဆီကဘာမျှော်လင့်သလဲ၊ ဘာတွေလွယ်ကူအောင်လုပ်မလဲဟန့်တားတာကိုမင်းသိတယ်။ ထိုအ Baba Yaga ကြိုတင်ခန့်မှန်းပေမယ့်ဘာမှဖြစ်ပါတယ်။
လူကြိုက်များသောယဉ်ကျေးမှု၌ Baba Yaga
ဒါကြောင့်အစဉ်အမြဲတစ် ဦး ဖြစ်ခဲ့သည်နေစဉ် slavic ကမ္ဘာကြီးကိုဇာတ်ကောင်အခုအချိန်အတန်ကြာတော့နယ်နမိတ်ကိုဖြတ်ကျော်သွားပြီ။ ငါတို့ပြောခဲ့သလိုပဲ ရုပ်ပြ၊ ရုပ်မြင်သံကြားနှင့်ရုပ်ရှင်လောကတွင်ထင်ရှားသည်။ ရုပ်မြင်သံကြားစီးရီး၏ဖြစ်ရပ်မှာတော့သင်မြင်လျှင် Netflix က OABaba Yaga သည်ရူပါရုံတွင်အမြဲပေါ်လာသည်ကိုသင်သိလိမ့်မည်။
ဒါ့အပြင်ပေါ်လာသည် နဂါးဘောလုံးFortune Baba Yaga ၏စာရင်းကိုင်သည်ထပ်တလဲလဲပါ ၀ င်သောဇာတ်ကောင်ဖြစ်သည် ငရဲကောင်Orson Scott Card (Ender's Game ကိုရေးသားသူ) ၏ဝတ္ထုတွင်၊ ဝိဇ္ဇာအတတ်အား, ၏စီးရီး၌တည်၏ Scooby Doo!, ဗီဒီယိုဂိမ်းထဲမှာ သင်္ချိုင်း Rairder ၏ထ နှင့် Castlevania: Shadows ၏သခင် နှင့်လည်း၏စီးရီး၌တည်၏ ယောဟနျသမတရားသောသူသည်ရုံသည်သူ၏ရုပ်အနည်းငယ်ကိုဖော်ပြရန်။
ပြီးတော့ဒီပွဲတွေအားလုံးဟာမလုံလောက်ဘူးဆိုရင်သူဟာတောင်အာဖရိကမှာတောင်ထင်ရှားနေပြီ အမျိုးသမီး ၀ ဘ်ဆိုဒ်, The Hairpin, နောက်ပိုင်းမှခုန်ရန် Baba ရဲ့အမြင်အနေဖြင့်အကြံဥာဏ်အပေါ်စာအုပ်ဆိုင်"Baba Yaga ကိုမေးကြည့်ပါ။ "
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Absolut ခရီးသွားခြင်း » ရုရှားထုံးတမ်းစဉ်လာများ - Baba Yaga
Lilian hernandez ဟုသူကပြောသည်
ရုရှားထုံးတမ်းစဉ်လာတွေအကြောင်းကျွန်တော်အမြဲသိချင်ခဲ့တယ်။ ကျွန်တော်ငယ်ငယ်တုန်းကရုရှားပုံပြင်စာအုပ်တစ်အုပ်ရခဲ့ပြီး“ Baba Yaga” လိုထူးဆန်းတဲ့အသုံးအနှုန်းတွေရှိတယ်။
Lilian Hernandez အားပြန်ပြောပါ